Saxda Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado saxda Photos ka Canon Digital Camer
> Resource > Ladnaansho > saxda Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado saxda Photos ka Camera Canon Digital
Waxaan soo kaban karto, Canon saxda Photos?
Waxaan si qalad ah la tirtiro dhammaan sawiro ka kaadhka xusuusta aan Canon camera digital. Iyagu dhammaantood waa u photos .orf. Waxaan dareemayaa inaan hadda ka qoomameyn. Laakiin waxaan si dhab ah u baahan tahay si aad u hesho dib kuwa photos saxda. Cid ii sheegi kartaa sida?
Iyada oo ay technology Horumarada sawir iyo muuqaalada user-friendly, Olympus waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan camera digital adduunka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhici karta in ay la kulmaan arrimaha Olympus saxda khasaaro sawir sababo kala duwan, sida tirtirka, howlgal aan habboonayn, kaydinta formatting warbaahinta, iwm Sidaas, waxa waxa ugu muhiimsan in la sameeyo marka ay soo food saartay arrintan ka? Waxaan u soo jeedin doonaa aadan isticmaalin Olympus camera digital iyo warbaahinta ay kaydinta mar dambe iyo raadiyo barnaamij soo kabashada sawir Olympus saxda si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa saxda qalab kabashada sawir sida u saamaxaya in aad ka bogsato tirtiray, formatted ama xitaa ku kharribeen photos saxda ka Olympus camera digital. Iyada oo ay howlgal ay fududahay, waxaad soo kaban doono sawiro saxda ah jid effortless oo khatar la'aan. All aad badiyay photos saxda dib sida asalka noqon doonaa.
Tag heli version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery si loo farsameeyo kabashada sawirka saxda hadda ah!
Qabtaan Olympus saxda Photo Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Si aad u soo kabsado oo dhan laga badiyay photos saxda, fadlan ha isticmaalin ama wixii xog ah cusubse waxaa lagu shubaa aad Olympus camera digital si looga fogaado xogta overwritten.
Hadda aynu ku sameeyo dib u soo kabashada la computer Windows. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad ku dhameysan kartaa dib u soo kabashada ee howlgallada la midka ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada sawirka saxda
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode furmo si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 baarista Olympus camera digital ah ama warbaahinta ay kaydinta
Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad Olympus camera digital ah ama warbaahinta ay kaydinta la your computer. Ka dibna waxaad u dooran kartaa on suuqa kala guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan u baar u badiyay photos saxda.
Fiiro gaar ah: Haddii photos saxda ah ayaa laga badiyay sababta oo ah formatting, inaad si fiican u xulan lahaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho photos Olympus saxda
Dhamaan sawirada saxda helo waa la soo bandhigi doonaa furmo suuqa ka dib markii iskaanka. Waxaad ku eegaan karo oo dhan oo iyaga ka mid in lagu hubiyo sida badan oo ka mid ah laga badiyay photos saxda lagu soo kabsaday karo.
Ugu danbeyn, waxaad karaa saxda sawiro aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: In si looga fogaado helay saxda sawiro ka overwritten, fadlan ha soo celiya in aad Olympus camera digital badbaadiyo inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.